အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဥာဏ်ရှိဖို့ထက် ဇွဲရှိဖို့ ကအဓိက | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဥာဏ်ရှိဖို့ထက် ဇွဲရှိဖို့ ကအဓိက
အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဥာဏ်ရှိဖို့ထက် ဇွဲရှိဖို့ ကအဓိက
Posted by etone on Aug 31, 2010 in Other - Non Channelized | 13 comments
ယာက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာလိုအရာတွေကအဓိကလိုအပ်သလဲ ?
ကျနော်ကတော့ အအောင်မြင်ဆုံးသူသည် ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ ဇွဲ အားလုံးကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်အောင်အချုိးညီညီ အသုံးချနိုင်သူဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။
တစ်ခုခုလိုနေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မူ့ကလည်း ပြည့်စုံသောအောင်မြင်မူ့ကိုမပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သုံးမျိုးစလုံးပေါင်းမှာကောင်းမှ အောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါ ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်တာရှိမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် လုပ်တာက ဥာဏ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ သူက မှ ဥာဏ်မကောင်းတာပါ။ ကိုယ်သွားမယ့် လမ်းကို ရွေးချယ်ရတာ မိမိ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့်သာ ရွေးချယ်သွားရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဥာဏ်မကောင်းတဲ့လူဆို ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား အောင်မြင်မှုကို မပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်က အစ်ကိုပြောသလို သုံးမျိုး အချိုးညီညီအသုံးချုနိုင်သူသာ အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ တစ်မျိုးတည်း ရသူအနေနှင့် အောင်မြင်နိုင်မည်လို့မထင်ပါ။
ကံလည်းကောင်း ဥာဏ်လည်းကောင်း ၀ီရိယလည်းရှိတဲ့ သူဆိုတာ တော်တော်ရှားတယ်နော် . ..
ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယတွဲမှသာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ရောက်မယ်လို့ မနောတော့ မြင်မိတာပါပဲ။
ငွေတာရီကတော့ အောက်ကလို ကဗျာစပ်ထားတယ်…။
ဆိုတော့.. သတ္တိ၊ဇွဲ၊လုံ့ လ ….တဲ့.။
အဓိပတိ ပစ္စယော အရတော့ ဆန္ဒာဓိပတိဖြစ်စေ ဥာဏာဓိပတိဖြစ်စေ အားကောင်းလာရင် အခြားအရာတွေကိုပါ အားကောင်းလာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
မမရဲ့ ပုံပြင်က ဘယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ရွေးရမလဲလို့ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ အိပ်မက်ကို သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
ဆေးပညာကို စိတ်မ၀င်စားလို့ programming ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
တရပ်တကျေးကို အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင် autocad က ခေတ်စားတယ်ဆိုလို့ အလုပ်ရလွယ်အောင် autocad လဲ သင်ခဲ့တယ်။
နောက်တော့လည်း programmer က လစာပိုကောင်းမယ်ထင်လို့ ဆက်ပြီးကျောင်းတက်ပါတယ်။
အခု လမ်းဆုံအလယ်မှာ ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေပါတယ်။
အိမ်မက်က ဆေးပညာလည်းတတ်ပြီးပြီ၊ ကွန်ပြူတာလည်းသင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ အင်ဂျင်နီယာပညာပါ ထပ်သင်လိုက်ပါလား။ ပြီးလို့မကျေနပ်သေးရင် ရုရှားသွားပြီး နူကလီယားဗေဒပါ ထပ်တက်လိုက်။ အဲသည်လောက်ပညာစုံရင် ခြောက်ကြိုးကဝေတောင် ကြောက်စရာမလိုဘူး။ လာထား ပျင်းသေးတယ်…
Please read this Pe Myint’s article and think about it.
စားသောက်ဆိုင်၏ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော အခန်းလေးတစ်
ခုတွင်း ကျွန်တော်ထိုင်နေသည်။ စားသောက်ဆိုင်က မြို့ပြင်ကျကျ
တစ်နာရီခရီး အကွာလောက် တောင်တန်းများပင် မြင်နေ၇သည့်
သို့သော် ကျွန်တော်နှင့် သုံးလေးပေ အကွာလောက်တွင် သေ
ရေး ရှင်ရေးတမျှ အမောတကော ကြိုးပမ်း ရုန်းကန်သံ တစ်ခုက
ယင်ကောင်လေးတစ်ကောင် ပြတင်းပေါက်မှန်ချပ် ကို ဖောက်
ထွက်ဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားနေသည်၊ သူ့ခန္တာကိုယ်၌ ကြွင်းကျန်
သမျှ စွမ်းအားကို ဖြစ်နိုင်စရာ မရှိသည့် သည်အရေးကိစ္စကြီးအတွက်
ညံသထက်ညံလာသော တောင်ပံခတ်သံက ကြေကွဲဖွယ်ကောင်း
လှသည့် ယင်ကောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ပြနေသည်၊ ကြိုးစား ၊
မအောင်မြင်လျှင် သည့်ထက်သည့်ထက်ပိုကြိုးစား ဟူသော လုံ့လ၀ါဒ
သို့သော် လောလောဆယ် သည်လမ်းစဉ်က အလုပ်မဖြစ်ပေ။
အသည်းအသန်ဂမူးရှူးထိုး ကြိုးစားနေသော်လည်း သူအတွက်
လွတ်လမ်းပေါ်မလာသေး။ ရှင်သန်မည့်အလားအလာလည်း စိုးစဉ်း
မျှမမြင်ရ၊ စင်စစ် မစဉ်းမစား အားထုတ်နေမူကြောင့်ပင် သည်ထောင်
ချောက် အတွင်းမှ သူထွက်မရခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊ သူမည်မျှပင်အား
ထုတ်ရုန်းကန်သော်လည်း ပြတင်းပေါက်မှန်ချပ်ကိုကား ဖောက်ထွက်
တိုင်သို့ ရောက်ရှိနေရေးအတွက် အသက်ပင်သေသေဟူသောစိတ်ဓာတ်
မျိုးဖြင့် ကျားကုတ်ကျားခဲ အားထုတ်ရုန်းကန်သွားရန် သန္နိဌာန်ခိုင်မာ
၀မ်းနည်းစရာပင်၊ ယင်ကောင်၏ဘ၀နိဂုံးကို သိမြင်နေရသည်၊
သူသည် ပြတင်းပေါက်ဘောင် အပေါ်၌ပင် သေပွဲဝင်ရမှာ သေချာနေပြီ။
အမှန်တကယ်တွင် အခန်း၏ တဖက်ခြမ်းသည် မှန်ပြတင်းမှ ခြေ
ဆယ်လှမ်းခန့်အကွာ၌ တံခါးတစ်ခုသည် ဟင်းလင်းပွင့်လျက်ရှိ၏
သုံးလေးစက္ကန့် ပျံသန်းရုံမျှပင် ယင်ကောင်ငယ်သည် သူမျှော်လင့်
တောင့်တသည့် ပြင်ပကမ္ဘာသို့ လှစ်ကနဲရောက်ရှိသွားနိုင်သည်၊
သည်မှာ အသည်းအသန်အားထုတ်ရုန်းကန်နေသည်ကို ခဏလေးနား
ကာ ဘေးဘီသို့အသာကြည့်ရုံမျှဖြင့် မိမိဘာသာထည့်သွင်းထားသည့်
မှန်နံရံကို ဖောက်ထွက်နိုင်သောအခွင့်အလမ်း(သို့) သည်အခန်း
တွင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်သော အခွင့်အလမ်းသည် ထိုအနီးအနားလေး
မှာပင်ရှိသည်၊ သိသူအတွက်ကား လွယ်ကူလှဘိ။
ဇွဲကြီးလှသော ထိုယင်ကောင်သည် အဘယ်ကြောင့်နောက်တစ်
မျိုးပြောင်း၍ ကြိုးစားရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ပါသနည်း၊ သူရွေးချယ်ခဲ့သော
တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကို အဘယ်ကြောင့်သည်မျှ သဲသဲမဲမဲ စွဲနေ
ရသနည်း၊ သည်နည်းလမ်းအတိုင်း ကျားကုတ်ကျားခဲလုပ်ခြင်းသည်
သာ အောင်မြင်မူရရန် အသေချာဆုံးဖြစ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် သည်
မျှ စွဲလမ်းယုံကြည်နေရပါသနည်း၊ သေချင်သေပေစေ၊ သည်နည်းလမ်း
အတိုင်းပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ အားထုတ်သွားမည်ဟူသောစိတ်သည် ဘယ်သို့သော
ယင်ကောင်အနေနှင့်တော့သူ၏ လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်သည်ပင် ကျိုး
ကြောင်းအသင့်မြတ်ဆုံး လမ်းစဉ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါမည်၊ သို့သော်
၀မ်းနည်းဖွယ် ကောင်းနေသည်က သူ့အယူအဆ သူ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်
သည် အသက်ဆုံးရူံးခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ရမည့် အယူအဆမျိုး လုပ်နည်း
ကြိုးစား၊ မအောင်မြင်လျှင် သည့်ထက်သည့်ထက်ပိုကြိုးစား၊ ဟူသော
နည်းသည် အမြဲသင့်တော်မှန်ကန်သည့်အဖြေနည်းလမ်း မဟုတ်ပါ။
သည်ဝါဒ တစ်ခုတည်းကို အးကိုးပြုထားရုံဖြင့် သင်၏ဘ၀ရည်မှန်းချက်
ထမြောက် အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟု စိတ်ချယုံကြည်၍မရ၊ စင်စစ်
သည်လမ်းစဉ်ကို တရားသေ ကိုင်စွဲခြင်းကြောင့်ပင် ပြသနာတွေရင်ဆိုင်
နည်းလမ်းကို ပြန်လှန်သုံးသပ်မူမပြု၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လည်း
မကြိုးစား၊ ၀ိရိယို အမြင့်ဆုံးတင်နိုလျှင် ရှိသမျှအတားအဆီးကို ဖောက်
ထွက်ကျော်လွှားနိုင်ရမည်၊ ဟူသောအစွဲဖြင့်ချည်း လုပ်ကိုင်သွားမည်
ဆိုက မအောင်မြင်ရုံမက အောင်မြင်မည့်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုပင်
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဟောတဲ့တရားတစ်ပုဒ်မှာ လူမှန်ရင် လူကောင်းဆိုတဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းဖို့နဲ့ လူတော်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး နှစ်ခုလုံးရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ခုလုံးမရှိနိုင်လို့ မဖြစ်မနေ တစ်ခုပဲရွေးရမယ် ဆိုရင် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းဖို့ကို ရွေးရပါမယ်တဲ့။ အီတုံးပြောတာကလည်း အဲဒီလိုပဲ ထင်ပါတယ်။
ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ ဒီသုံးခု မှာ မြှောက် ဖေါ်ကိန်းတွေ လို သဘောထားကြည့်ရအောင်
ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ ထဲမှာ တစ်ခုခုက ၀ သုံည ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် အဖြေက တော့ သုံညဘဲဖြစ်မှာပါ။
ကံ ရော ဥာဏ် ရော အရမ်း ကောင်းနေတယ် ဆိုပါစို့။ဒါပေမယ့် ၀ီရိယ မှာ သုံည ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်
ထွတ်လာမယ့် ရလဒ် က လဲ သုံည ဘဲ ဖြစ်မှာပါ။
အီးတုံး ဆိုလိုတာက မဟာဇနကမင်းသားလို မဆုတ်မနှစ်သော ဇွဲရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို တင်ပြချင်တာထင်ပါတယ်။သောမစ်အစ်ရစ်စင်သာ ဇွဲမရှိခဲ့ရင် ဘက်ထရီ ဆိုတဲ့လျှပ်စစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။